ANKASINA : Tovolahy tratra nanendaka naiditra am-ponja vonjimaika omaly
Lehilahy iray 19 taona monina any Ankazomanga no voasambotry ny Polisy miasa ao amin’ny CSP 7, etsy 67ha ny 06 oktobra 2019 lasa teo teny Ankasina noho ny resaka fanendahana ihany. 8 octobre 2019
Ny 06 oktobra 2019 tokony ho tamin’ny 08 ora alina dia lehilahy 01 andeha hamonjy fodiana no lasibatry ny asa fanendahana nataona tovolahy miisa 02. Nihazo ny elankelan-trano teny amin’ny fiangonana Salema Ankasina ity lehilahy ity no nifanehatra tamin’ireto roa lahy ka lasa tamin’izany ny findainy. Raha vao azon’ireto farany ny finday dia nitsoaka izy ireo.
Tratran’ny tsy nampoizina anefa ireo olon-dratsy fa nifanena tamin’ny Polisy ny boriborintany fahafito mpanao fisafoana tany anaty elankelan-trano. Vao nahita ireo Polisy izy roa lahy dia vaky nandositra niverina ka raikitra ny fifanenjehana ary tra-tehaka ny 01 tamin’ireo mpanendaka. Natolotra ny Fampanoavana omaly 07 oktobra ity lehilahy ity ary naiditra am-ponja vonjimaika.